Abụ nke 42—Ekpere Ohu Chineke | Abụ Ndị Kraịst
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian Amharic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Biak Bicol Bislama Boulou Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Damara Dangme Danish Dayak Ngaju Douala Drehu Dutch Edo English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Fulfulde (Cameroon) Ga Georgian German Gokana Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hiri Motu Hungarian Iban Ibinda Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kachin Karen (S'gaw) Kazakh Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Kosraean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kwangali Kwanyama Laotian Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Mauritian Creole Mazatec (Huautla) Mixe Mixtec (Guerrero) Moore Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Nepali Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Palauan Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (European) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Samoan Sangir Sango Saramaccan Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Venda Vietnamese Wallisian Wolaita Xhosa Yapese Yoruba Zulu
Ekpere Ohu Chineke
(Ndị Efesọs 6:18)
1. Ị dịe-bube, Jehova Chineke.
K’a sọpụrụ aha gị ma doo yan-sọ.
Ọ b’uche gị g’emezu n’ụwa.
Anyị n’arịọ gị k’Al’eze gị bịa.
K’ọ bịa n’oge ị chọrọ,
K’anyị nwetan-gọzi ya.
2. Nna, biko nara ekel’anyị.
Ngọzi gị bụn-gọzi n’enwegh’atụ.
Amamihe k’i ji gọzia-nyị.
I nyer’anyịn-dụ ma n’eduzia-nyị.
Anyị ga n’ekele gị.
Ụzọ gị niile dịm-ma.
3. N’ụwa niile, Setan n’akpagbua-nyị.
Anyị chọrọ k’ị n’akasia-nyị obi.
Nna, biko mee k’anyị d’ike.
Anyị bum-kp’anyị n’abịakwute gị.
Mee k’anyị n’em’uche gị,
(Gụọkwa Ọma 36:9; 50:14; Jọn 16:33; Jems 1:5.)
Ekpere Ohu Chineke (Abụ nke 42)